Ifulethi eliwusizo elihle e-Bello Campo - I-Airbnb
Ifulethi eliwusizo elihle e-Bello Campo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nieves
U-Nieves Ungumbungazi ovelele
Uzoba nokufinyelela kwangasese kuyo yonke indawo okuhlanganisa igumbi lokuphumula, ikhishi, ikamelo lokulala, indlu yokugezela kanye negumbi lokuhlanza izingubo.
Isakhiwo sisesitaladini esincane esinamapulangwe esiseduze nomgwaqo oyinhloko, ngakho indawo ezungezile ithule kuyilapho isendaweni ejabulisayo.
I-Bello Campo iyindawo enhle kakhulu, ephephile futhi enezici zezidingo ezikhethekile ngezokuthutha zomphakathi. Izitolo, amasevisi, izindawo ezithakazelisayo kanye nesikhungo sokuthenga se-Sambil kuqhele ngebanga lezinyawo.
Leli fulethi elinekamelo lokulala elilodwa, elihle futhi elisebenzayo linezitezi ezinhle ze-granite kusukela ngawo-1950 nosilingi ophakeme (cishe. 2.80m/ 9'2.).
Ifulethi linakho konke okudingayo ukuze uthokomale, kuhlanganise nombhede omkhulu, i-air conditioning, ikhishi elimiswe kahle, i-cable TV nomshini wokuwasha.
Isakhiwo sinomthombo wamanzi, okwenza ukwazi ukulungisa ukushoda kwamanzi okuvamile e-Caracas.
I-Wifi nendawo yokusebenzela enikezelwe yenza lokhu kube yinto efanele kubantu abasebenzela ekhaya. Amakhabethe ayo amabili anikeza isitoreji esiningi kulabo abangahambi ngokukhanya noma labo abafuna ukuhlala isikhathi eside.
UNieves Ungumbungazi ovelele